Xogta Find out more Doorashooyinka Soomaaliya
Sanadka 2020/21 waxaa Soomaaliya ka dhacaysa doorashada heer federaal oo isugu jirta doorashada xildhibaannada, guddoonka baarlamaanka, iyo madaxweynaha. Waxaa sidoo kale dhaca doorashada heer dawlad-goboleed oo iyadana leh heerar kaas la mid ah.
Barta Doorasho waxay noqoneysaa meel loogu soo hagaago dhammaan macluumaadka ku saabsan arrimaha doorashada, sida liiska iyo taariikhda murashixiinta u tartameysa kuraasta kala duwan, qoraallada iyo dokomintiyada la xiriira doorashada, iyo wararka la xiriira arrimaha doorashada.
Bartan oo ah mid madaxbannaan, ujeedka laga leeyahay waa in la dhiirrigeliyo daah-furnaanta doorashada iyo sidii loogu tartami lahaa waxqabad, aqoon iyo waayo-aragnimo.
Murashixiinta Xilka Madaxweynaha
Liiska Murashixiinta Golaha Shacabka
Murashax Aqal Sare